Mgbe E Bibichara Ụlọ Nsọ Jeruselem n’Afọ 70, È Mechara Rụghachi Ya?
Ụlọ Nche (Nke A Na-amụ Amụ) | Eprel 2013
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Mgbe e bibichara ụlọ nsọ Jeruselem n’afọ 70 Oge Ndị Kraịst, è mechara rụghachi ya?
JIZỌS kwuru na a gaghị ahapụ otu nkume n’elu nkume ibe ya n’ụlọ nsọ Jehova. Ihe ahụ o kwuru mezuru n’afọ 70 Oge Ndị Kraịst mgbe Taịtọs du ndị agha Rom gaa bibie Jeruselem. (Mat. 24:2) Ma, Eze Ukwu Rom aha ya bụ Julian mechara chọọ ịrụghachi ụlọ nsọ ahụ.
Ndị mmadụ na-ekwu na Julian bụ eze Rom ikpeazụ kpeere arụsị. Ọ bụ nwa nwanne Constantine Onye Ukwu. Ndị sị na ha bụ Ndị Kraịst kụziiri ya otú ọ ga-esi bụrụ Onye Kraịst. Ma, mgbe ọ ghọrọ eze ukwu n’afọ 361, o kwuru na ya abụghịzi Onye Kraịst n’ihi arụrụala ndị sị na ha bụ Ndị Kraịst na-arụ. Ọ sịrị na ya bụzi onye ọgọ mmụọ. Ụfọdụ akwụkwọ ndị kọrọ ihe ndị mere eme kpọrọ ya “Onye Si n’Ezi Ofufe Dapụ.”
Julian kpọrọ okpukpe ndị sịrị na ha bụ Ndị Kraịst asị. Otu ihe ọ ga-abụ ya mere o ji kpọ ya asị bụ na mgbe ọ dị afọ isii, ọ hụrụ otú ndị isi chọọchị si gbuo nna ya na ndị ikwu ya. Ndị na-akọ akụkọ gbasara chọọchị kọrọ na Julian gwara ndị Juu ka ha rụghachi ụlọ nsọ ha, ka o gosi na Jizọs bụ onye amụma ụgha. *
O doro anya na Julian chọrọ ịrụghachi ụlọ nsọ ahụ. Ma, o dochaghị ndị na-akọ akụkọ ihe mere eme anya ma ò mechara bido ịrụghachi ya. Ọ bụrụkwa na o bidoro ịrụghachi ya, o doghị ha anya ihe mere na ọ rụchaghị ya. Ma, otu ihe doro anya bụ na e gburu Julian mgbe ọ chịrị ihe na-erughị afọ abụọ, atụmatụ ya niile akụọ afọ n’ala.
Ihe a ga-abụ otú ụlọ nsọ ahụ dị n’oge Jizọs. Foto dị n’okpuru ya bụ otú ọ dịzi taa
^ para. 5 Jizọs ekwughị na a gaghị arụghachi ụlọ nsọ ahụ, kama, o kwuru na a ga-ebibi ya, bụ́kwanụ ihe mere n’afọ 70 Oge Ndị Kraịst.
Ị̀ Maara?—Eprel 2013
AKỤKỌ NDỤ Ozi Oge Niile Anyị Jere Iri Afọ Ise n’Ebe Ugwu Finland